MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA LABRADOODLE IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Labradoodle iyo Sawiro
Bennett Labradoodle da'da 3 1/2 sano. Mulkiilihiisu wuxuu leeyahay jaakaddiisu waxay uga egtahay Poodle-ka Labrador.
Macluumaad Yaryar Labradoodle
Macluumaadka Petite Labradoodle
pitbull eeyo yaryar oo bunni iyo caddaan ah
Labradoodle-ka Mareykanka ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Labrador dib u habeyn iyo Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Fiiro gaar ah: waxaa jira laba nooc oo gebi ahaanba ka duwan Labradoodles, Australian Labradoodle iyo American Labradoodle. The Australian Labradoodle waa eey saafi ah, halka Labradoodle-ka Mareykanku uu yahay eey isku jira.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo ay ubaxleydu u soo saaraan Labradoodles Mareykan ah.
F1 = 50% Labrador iyo 50% Poodle: Kani waa Shaybaarka to Poodle iskutallaabta kani waa jiilkii ugu horreeyay, oo dhaliya carruur caafimaad qaba! Nooca timuhu wuxuu noqon karaa mid jilicsan sida Shaybaarka, wiry sida Irish Wolfhound ama wavy / shaggy way daadin karaan ama kuma daadin karaan arday isku qashin ah way kala duwanaan karaan. Tani ma aha iskutallaabta ugu fiican ee dadka xasaasiyad daran qaba.
F1-B = 25% Labrador Retriever iyo 75% Poodle (F1 Labradoodle iyo Poodle iskutallaabta): Kani waa Labradoodle dib loogu soo celiyey Poodle, wavy curly shaggy eeg doodle oo aad ugu habboon noocyada jaakadaha. F1B waa midka ugu badan ee u muuqda mid aan daadin iyo xasaasiyad ka roon DIYAARINTA KASTA waana tan ugu fudud ee la daryeelo.
F2 = F1 Labradoodle iyo F1 Labradoodle iskutallaab: Isku daridan waxaad kaheleysaa boqolkiiba isku mid ah Lab Poodle isku darka sida aad u heli laheyd F1 Labradoodle, marka waxay u badan tahay inay daadiyaan.
F3 = F2 Labradoodle iyo F2 Labradoodle iskutallaabta
Jiil badan = F3 ama jiil ka sareeya Labradoodle iyo F3 ama jiil ka sareeya Labradoodle iskutallaab: Tani waa waxa Labradoodles-ka Australia ay badanaa yihiin.
Ku soo dhowaanshaha sinta dysplasia iyo dhibaatooyinka isha hidde.
IDCR = Diiwaangeliyaha Kaydinta Cunnada ee Caalamiga ah
Roxy Labradoodle kahor intaan timaheeda guga la jarin
'Tani waa Roxy labradoodle madow ka dib markii ay jartay timaheeda guga. Way ku faraxsan tahay inay khafiifiso, laakiin ma sii dheereysto ee dhakhso ayuu dib ugu soo noqdaa.
Roxy Labradoodle madow ka dib markii timaheeda guga la gooyey
Lahaanshaha sawirka Adorabledoodles
'Murphy (hoosta) iyo Teddy (kor) waa 3-bilood jir caadi ah F1 shukulaatada Labradoodle eey ah, oo ay iska leeyihiin laba saaxiibbo wanaagsan ah, oo labaduba ah macallimiin loo yaqaan violin! Waxaan ku qabanay dheryihii ubaxa oo waxaan bilownay inaan kaxeyno, laakiin waa inaan marka hore sawir qaadnaa ... aad bay u qurux badneyd! Labradoodles waxay sameeyaan xayawaan la yaab leh. Waxaan ahayn is dhexgalka bulshada iyaga iyo iyaga oo jimicsi leh maalin kasta waan arki karaa dabeecadooda wanaagsan ee soo koraysa. Woof! Kibir Doodle Mommas, Ashley (Murphy hooyadeed) iyo Liz (Teddy hooyadeed).
Bosco, waa 5 jir Canadian ah F1 Standard Labradoodle
Dawan eeyaha yar yar ee Labradoodle markay jiraan 6 toddobaad jir— 'Iyadu waa 50% Labradoodle Dahab ah iyo 50% Cad Cad Poodle.'
shukulaatada shaybaarka jarmalka gaaban isku dhafka ah
Shukulaatada shukulaatada Labradoodle, waxaa cunay Ayers Pampered Pets
Labradoodle qaangaar ah, oo lagu xanaaneeyo Ayers Pampered Pets
Bennett Labradoodle ee 3 1/2 sano jir ah oo leh jaakad u eg poodle
'Kani waa Clyde Labradoodle oo jira 7 sano. Koodhkiisu ma jilicsan yahay, wuu sii shaag badan yahay oo wuu muuqdaa. Isagu waa qabow yahay, dib u dhigay oo ka jilicsan yahay inta badan Labradoodles kale. Waxay noqon kartaa da '.
Eeg tusaalooyin dheeri ah ee Labradoodle
Labradoodle Sawirada 1
Labradoodle Sawirada 2
Labradoodle Sawirada 3
Labradoodle Sawirada 4
Labrador Retriever Mix Noocyada Eeyaha
Poodle Mix Noocyada Eeyaha
isku dhafka sternard iyo chihuahua
pomeranian bichon mix la iibinayo
sida weyn ka heli karaan dheri doofaarka caloosha ah
sida loo tababarto digaag yar oo 4 wiig jir ah
Boqor Charles poodle muqisho isku darka